Zvikonzero Nei Tichida Chitubu chechiteshi | Rayson
Zvikonzero Nei Tichida Chitubu chechiteshi
Iko kusanganiswa kweiyo yakaoma mapurasitiki uye yakapfava mapurasitiki inosimbisa grip, inopa donhwe rakadonhedzwa donhwe rekudonha kusvika pamamita gumi. Port yako ine gobvu bhatani rinofukidza uye rakachena renje. Iyo dema, yakasviba yebhuruu uye grey. Ted Baker, mukubatana neyemagadziro weTed Baker, akagadzira nhevedzano yefoldafu yegirazi reGirazi S8, kuratidza iyo yazvino maruva ekudhinda.
Ipapo iwe unogona kuwedzera dzimwe huswa / huswa mbeu, mashizha madiki, matombo, matavi, etc kana uchida. Gadzira nzvimbo yakasikwa yekudyisa yemasvosve. Nekuti masvosve anofarira hafu yemvura, iwe unofanirwa zvakare kuwedzera mvura shoma. ivhu nyoro. Isa pasi pe2-bhodhoro pamusoro. Inobhururuka pasi kusvika pasi payo uye uzvisundire mukati me2-
Iwe unogona kutenga imwe yeyako yechando imba uye imwe yekuchengetedza system yezhizha rako remusha. Kune makambani mazhinji anotengesa masisitimu ekuchengetedza epamba. Iwe unogona kunge wakasangana nemusuwo wekova-mukova alarm munharaunda yako. Mutungamiriri ari mumhuri kuchengetedzwa kwemhuri ADT. Chero bedzi iwe uchiisa chiratidzo chebasa rekutarisa, unogona kuisa alarm alarm yemahara.